रेल की रेला | www.24nepal.com
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखी नै ओलिको सपना रह्यो नेपालमा रेल ल्याउने । चिन तिरको रेल काठमाडौं हुँदै बुद्ध जन्मभुमि लुम्बिनी सम्म र भारतबाट आउने रेल काठमाडौं सम्म । यसरी दुई देशबाट आउने रेलले मात्र मुलुकले समृद्धि पाउने उन्को सोचाइ आफ्ना दुई देशको भ्रमणमा पहिलो प्राथमिकतामा राखे ।
मुलुकमा भएको पुरानो रेल सेवा पनि यिनै राजनीतिक खिचातानीले बन्द भएको अबस्थामा ओलिले दुबै देश बाट रेल ल्याउने सपना बाड्दै गर्दा रेल कसरी आउँछ ? देशको पुजिले रेल ल्याउन सकिन्छ सकिन्न ? देशको पुजिले रेल ल्याउन नसके कस्ले रेलमा लगानी गर्ने भन्ने बिषय अहिलेसम्म अन्धाधुन्ध नै छ ।
दुई देश बाट रेल आउदा हाम्रो जस्तो अरु देश बाट आयातमा भर पर्ने देशले कस्तो फाइदा लिन सक्ला यो पनि अहिलेसम्म गर्भ कै बिषय छ । भारत र चीन बाट आउने रेल बाट समान मात्र आयत गर्ने र केहि भारती र चाइनिज पर्यटक मात्र भित्र्याउने हो भने त्यो रेलमा लगाएको लगानिले धान्न सक्ला ?
मानिस अहिलेपनि एक झोलुङ्गे पुलको अभावमा तुइन चडेर नदि वारपार गरिरहेका छ्न । भारत र चीन बाट आउने रेलले के ती तुईन चडेर खोला तर्ने नागरिक हरुको जिबनमा फरक पार्ला ? जस्ता सवाल हरु अहिलेसम्म अनुत्तरित छ्न ।
खानेपानीको अभावमा मानिसले काकाकुल झै हुन परेको बेला समुन्द्रमा पानी जहाज तुईन चडेर नदि पार गर्नु पर्ने अबस्थामा रेल जस्ता बिषय अहिले रेला जस्तो लागि रहेका छन । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको जनताको आधारभूत आबस्यकता परिपुर्ति गर्नु हो । तर यी आधारभुत आबस्यकता भन्दा दुई देशको रेल काठमाडौंमा जोड्ने कुरा लाई बडि प्राथमिकता दिनु पक्का ओलिले रेलमा रेला गरेको देखिन्छ ।
सामान्य सिटामोल र जिबनजल नपाएर जनता हरु अकालमा ज्यान गुमाउन परेको बिषयलाई नजर अन्दाज गरि ओलिको रेलमा ध्यान जानू पक्का जनताको मनोदशा संग रेला गरेको देखिन्छ । समयमा उपचार नपाएर वा सडकको असुबिधाकारण गर्भवती महिला वा गम्भीर बिरामीले बाटामै ज्यान गुमाउन पर्ने अबस्था छ । जनताको यस्तो अबस्था हुँदा हुँदै ओलि रेलको रेलामा रुमल्लिनु कति जनता प्रती सरकार उत्तरदायी छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
देशको मुख्य सहर काठमाडौं बासी बर्षौ देखि धुलो धुवा बाट प्रताडित छ्न । एसियाकै पहिलो दुर्गन्धित सहरको रुपमा काठमाडौं चिनिन थालेको छ । यस्तो दुर्गन्धित सहरलाई ब्याबस्थित गर्ने भन्दा दुई देशको रेल जोड्नमा सरकार तल्लीन छ ।
भुकम्प गएको ३ बर्ष बितिसक्दा पनि भुकम्प पिडित अझै पाखामा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन ति जनताको गाँसाबासको समस्याको पिडाले पोल्नु भन्दा ओलि सरकार लाई दुई देशबाट आउने रेलको डब्बाले पोलेको छ । महङ्गिले आकाश छोएर गरिबका घरमा आगो बल्न छाडेको बेला सतक भन्दा लामो लस्कर लिएर ओलि सरकार चिनमा रेल लिन पुगे । यसरि जनताको दैनिकी लाई समेत नजर अन्दाज गर्दै रेलमा ओलिको ध्यान जानुले पक्का ओलि रेलको नाममा आम नागरिक संग रेला गरिरहेका छ्न ।